Hanjabaaddii Mareykanka dhag jalaq looma siinin oo markabkii Iraan waa laga 'iibsaday' Saliidda
Monday July, 13 2020 - 15:33:50
Monday September 09, 2019 - 09:28:34 in by salman abdi
Laakiin afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay kaliya in Markabku uu gudbiyay xamuulkii saarnaa ka dib markii uu ku xirtay "Xeebta badda Mediterranean-ka", mana uusan carrabaabin waddan khaas ah oo saliidda iibsaday.
"Waan sii wadi doonnaa inaan Cadaadis saarno Iiraan, sida uu Madaxweyne Trump yirina ma jiri doonto wax khafiifin ah oo ku aaddan ganacsiga saliidda Iiraan", sidaas waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal u hadlay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka, oo lagu magacaabo Sigal Mandelker.
Afhayeenka wasaaraddaas Abbas Mousavi ayaa sheegay in markabkan oo lagu magacaabo Stena Impero uu marayay marxaladihii dhinaca sharciga ee ugu dambeeyay, lana filayo in "dhawaan" lasii daayo.
Waxaa Markabkaas la heystay tan iyo 19-kii bishii Luulyo, waxaana lagu eedeynayay inuu jabiyay sharciya xuduudaha badda - Iyadoo Iiraan ay si joogto ah u beenineysay in qabashadiisa ay wax lug ah ku leedahay Markabka kale ee laga heystay.
Sidoo kale waxay mas'uuliyiinta Aqalka Cad ku hanjabeen inay cunaqabateyn saari doonaan waddan kasta oo isku daya inuu caawiyo markabkaas.
Galmudug oo beenisay in walaac laga muujiyay ciidamada Haramacad ee ku sugan Dhuusomareeb
08/07/2020 - 12:53:52
Somaliland oo shaacisay 10 kiis oo 6 kamid ay yihiin Ajaaniib laga helay Coronavirus
05/07/2020 - 13:44:48